Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Momba ny Bulgaria » Olona 45 no maty tamin'ny fianjeran'ny fiara fitateram-bahoaka tao Bolgaria
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Momba ny Bulgaria • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Araka ny filazan'ny fampahalalam-baovao Bolgara, teratany Albaney avokoa ireo mpandeha 50, raha samy nanana pasipaoro Makedoniana Avaratra kosa ny mpamily.
Fiara fiara fitateram-bahoaka misy takelaka fahazoan-dàlana avy any Makedonia Avaratra no nianjera ary nipoaka tany andrefana Bolgaria lalambe.
Ny fiara fitateram-bahoaka, izay voasoratra anarana tany Makedonia Avaratra, dia nandeha avy any Istanbul ho any Skopje.
Araka ny filazan'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Minisiteran'ny Atitany Bolgaria Nikolai Nikolov, olona 45 farafahakeliny, anisan'izany ny ankizy maromaro, no maty tamin'ilay loza mahatsiravina nitranga ny talata maraina, tokony ho tamin'ny 2 ora maraina tany an-toerana.
Ankizy roa ambin'ny folo no maty tamin'ny loza, hoy ny fampitam-baovao Bolgara. Ny tatitra hafa dia nilaza fa olona 46 no maty.
Vitsy ny tafita velona, ​​ary ny sasany may mafy, dia nentina tany amin’ny hopitaly any Sofia renivohitra Bolgara.
Maya Argirova, lehiben'ny sampana may ao amin'ny hopitaly, dia nilaza fa nisy ireo niharam-boina naratra nitsambikina teo am-baravarankely rehefa niezaka nitsoaka ny fiara fitateram-bahoaka.
Mbola tsy fantatra mazava ny anton’ny loza.
Nisy olona 52 tao anaty fiara fitateram-bahoaka. Araka ny filazan'ny fampahalalam-baovao Bolgara, teratany Albaney avokoa ireo mpandeha 50, raha samy nanana pasipaoro Makedoniana Avaratra kosa ny mpamily.
BolgariaNilaza ny Minisitry ny Atitany Boyko Rashkov fa hohadihadiana ny loza “mampihorohoro”.